တစ်ဟုန်းထိုးတိုးတက်သောအသင်းတော်! | An Exploding Church! | Real Conversion
၂၀၁၂၊ စက်တင်ဘာလ၉ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြား သောဒေသနာတော်၊
“ထိုအခါ ကိုယ်တော်က၊ စပါးရိတ်စရာများစွာရှိ၏။ ရိတ်သောသူတို့ သည် နည်းကြ၏။ ထို့ကြောင့် လုပ်ဆောင်သောသူတို့ကို စပါးရိတ်စေ ခြင်းငှါ၊ စေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း၊ စပါးရှင်ကိုဆုတောင်းကြလော့ ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏” (ရှင်မဿဲ ၉း၃၇ç၃၈)။
ရံဖန်ရံခါတရားဟောဆရာတို့က၊ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပါတ်သတ်၍ ဘုရားသခင်ထံ တော်သို့ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် အသင်းတော်သူ^သားတိုင်းသည် အမှုတော်ဆောင်းများ ဖြစ်ကြပြီဟု တွေးထင်ကြပေမည်။ လုံးလုံးမှားယွင်းနေခြင်းတော့မဟုတ်ပါ။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆိုခြင်းထက် လက်တွေ့အသုံးတည့်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့သည် ဆုတောင်း ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သောအခါ ဝိညာဉ်နိုးကြားလာပြီး၊ သတင်းကောင်းဝေငှရန် နိုးဆော်ရာ၌ လက်တွေ့အသုံးချ ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်ဘုရားက တပည့်တော်ဖို့အား ထိုသို့ တိတိကျကျ ပြောလိုခြင်းမဟုတ်နိုင်ပါ။
ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားက၊ အမှုတော်မြတ်အတွက် အထူးသဖြင့် ကောက်လှိုင်း များရိတ်သိမ်းရန် ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းခိုင်းခြင်းသာဖြစ်ပါသည်! ယေရှုဘုရား ထိုသို့ မိန့်တော်မူရာတွင် ခရစ်ယာန် တဦးချင်းစီသည် အမှုတော်ဆောင်ရမည်ဟု ဆိုလိုပေ! တပည့်တော်တို့လည်း ဤအချိန်အထိ၊ အထူးသင်ကြားခြင်းမခံရကြသေးပေ။ အချို့တပည့်တော်တို့သည်၊ အသက်တာပင် မပြောင်းလဲကြသေးပါ။ ဒေါက်တာမက္ကီးပြော ကြားသည်မှာ၊ ထိုတပည့်တော်တို့သည်၊ ယေရှုဘုရားသေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမ တိုင်မှီ ကယ်တင်ခြင်း မရရှိကြသေးဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သေချာသည်မှာ ယုဒရှကာယုတ်သည် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိခဲ့ပါ။ သောမစ့်သည်လည်း သေခြင်းမှ ထမြောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း လက်ခြေသံမှိုရိုက်ထားသော အမာရွက်ကို မမြင်ဘဲ၊ သတင်းကောင်းကို မယုံကြည်ခဲ့ပါ။ ရှင်ပေတရုလည်း ယေရှုဘုရား၏ ကားတိုင်ခရီးကို တားဆီးခဲ့သဖြင့် ဆုံးမခြင်းကို ခံခဲ့ပါသည်။ ရှင်မဿဲအခန်းကြီး၁၀၊၌ တပည့်တော် တို့အား သတင်းကောင်းဝေငှရန် စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ အသစ်သော ဝိညာဉ်ကောက်လှိုင်း များယူဆောင်လာနိုင်ဖို့ အထူးသဖြင့် ဆုတောင်းဖို့လိုကြောင်း သွန်သင်ခဲ့ပါသည်!
ထိုသို့မိန့်တော်မူခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ မည်သို့အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေပါ သနည်း? အဘယ်ကြောင့် လူသစ်တို့ကို ဝိညာဉ်ဖမ်းဆီးဖို့ အသင်းတော်တို့က ချက်ချင်း စေလွှတ်ရမလဲ! ဘာကိုဆိုလိုပါသနည်း? “အသစ်”သော ဝိညာဉ်မျက်စိဖြင့် မြင်လျှက်၊ ယေရှုဘုရားက မည်သို့ပြုစေသည်ကို ယနေ့အသင်းတော်များ၊ သိမြင်ကြပါစို့၊ ဤအသင်းတော်၌ သင်သည် ပထမအကြိမ် တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါက၊ ဤအသင်းတော်၌ အသစ်သော ဝိညာဉ်များ မှန်ကန်စွာ ခေါ်ဆောင်လာနိုင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးပါ သည်။ ဤသည် သမ္မာကျမ်းစာတော်၏ အလင်းဖြစ်သည်။
“ထိုအခါ ကိုယ်တော်က၊ စပါးရိတ်စရာများစွာရှိ၏။ ရိတ်သောသူတို့ သည် နည်းကြ၏။ ထို့ကြောင့် လုပ်ဆောင်သူတို့သည် စပါးရိတ်စေ ခြင်းငှါ၊ စေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း စပါးရှင်ကို ဆုတောင်းကြ လော့”(မဿဲ ၉း၃၇ç၃၈)။
ကျွန်ုပ်တို့လည်း သင့်အား ထိုကဲ့သို့ပြောပါမည်။ သင်သည် အသင်းတော်သို့လာ ရောက f၍၊ သတင်း ကောင်း နားထောင်ပြီး၊ အခြားသော ဝိညာဉ်တို့ကို အသင်းတော်၌ ခေါ် ဆောင်လာခြင်းအားဖြင့် အသင်းတော်ကို ကူညီမစရန် သင့်အဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေး နေပါသည်။ ထိုကျမ်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ခြားနားသော အမှန်တရားနှစ်ခုရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်နိုင်ပါသည်။
၁။ပထမ၊ ယေရှုသည် ဇာတိပကတိတပည့်တော်တို့ကို ခေါ်ယူပြီး ဝိညာဉ်များ ဖမ်းဆီးရန် ချက်ချင်းစေလွှတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်မဿဲ၄း၁၈-၂၀ကို ဖွင့်ထားကြပါ၊ အသံကျယ်လောင်စွာဖြင့် ဖတ်ကြားကြပါစို့။
“ဂါလိလဲအိုင်နားမှာ ကြွတော်မူစဉ်၊ ပေတရုဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်သောရှိမုန်နှင် အန္ဒြေ၊ညီအစ်ကို နှစ်ယာက်တို့သည် တံငါဖြစ်၍၊ အိုင်တွင်ပိုက်ကွန်ဖြန့် ချသည်ကိုမြင်တော်မူလျှင်၊ ထိုသူတို့အား ငါ့နေက်သို့လိုက်ကြလော့။ သင်တို့သည် လူကိုမျှားသော တံငါဖြစ်စေခြင်းငှါ ငါပြုမည်ဟု အမိန့်တော်ရှိလေသော်၊ ထိုသူတို့သည် ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကို စွန့်ပစ်၍ နောက်တော်သို့ လိုက်ကြ၏” (မဿဲ၄း၁၈-၂၀)။
ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့အား ပထမဦးစွာ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ငါ့နောက်သို့လိုက် လော့။ သင်တို့သည် လူကိုမျှားသော တံငါဖြစ်စေခြင်းငှါ ငါပြုမည်” (မဿဲ၄း၁၉)ဟူ၍ မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ အောက်ပါ ဓမ္မသီချင်းသည် ၎င်းကျမ်းပိုဒ်ကို ရှင်းလင်းစေပါသည်။
(၁၈၈၈-၁၉၅၇ဟနရီ.ဒီ.ကလက်ခ် သီကုံးရေးသားသော “လူကိုမျှား
သင်တို့အား တံငါသည်ဖြစ်စေမည်ဟူ၍ ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့အား မိန့်ကြားစဉ်တွင်၊ ထိုတပည့်တော်တို့ကို နုတ်ကပတ်တော် သင်ကြားခြင်းမတိုင်ခင်၊ တပါး သူတို့၏ ဝိညာဉ်ကို ဖမ်းဆီးခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့၏ မေးခွန်း များအားလုံး ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဓမ္မပညာ သင်ကြားပေးခြင်းလည်း မရှိခဲ့ပါ၊ ယုံကြည်ခြင်းကို မည်သို့ ကာကွယ်ပြောဆိုရမည်ကိုလည်း မသွန်သင်ခဲ့ပါ နည်းတူစွာ ခရစ်ယာန် သမိုင်းကြောင်းကိုလည်း သင်ကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဆန်ဒေးလ်စကူးလ် သင်ကြားခြင်း လည်းမရှိခဲ့ပါ။ ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းလည်း သင်ကြားပေးခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ထိုသို့ မသွန် သင်ခဲ့ပါ! တပါးသူတို့၏ ဝိညာဉ်ကို “ဖမ်းဆီးဖို့”ရန် ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့အား စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်! ယေရှုသည် ဦးစွာပထမ တပည့်တော်တို့အား မိန့်ကြားခဲ့သည်မှာ “ငါနောက်သို့ လိုက်ကြလော။ လူကိုမျှားသော တံငါဖြစ်စေခြင်းငှါ ငါပြုမည်”ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ဤကျမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရိုးရှင်းသော ရှင်းလင်းချက်ကို သင်အားအတည်မပြော နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ခရစ်တော်၏ ပုံဥပမာနောက်သို့ လိုက်သင့်ပါသည်။ အသင်း တော်သို့ ဦးစွာပထမ သင်ရောက်ရှိလာဖို့ ခရစ်တော်၊ သင့်အား အလိုရှိပါသည်။ တပါးသူတို့အားလည်း အသင်းတော်သို့ သင်ခေါ်ဆောင်လာရန် ခရစ်တော် သင့်အား အလိုရှိပါသည်။ ယ္ခုပင်လျှင်၊ သင့်အားတပါးသူတို့ထံ သွားရောက်ဖို့ အသင်းတော်သို့ ခေါ်ဆောင်လာရန် ခရစ်တော် သင့်အားအလိုရှိပါသည်။ ဒီညပင်အစပြုလိုက်ပါ! တပါး သူတို့ထံသို့သွားပြီး သင်နှင့်အတူ အသင်းတော်သို့ ခေါ်ဆောင်လာပါ! မတ်တပ်ရပ်လျှက် ၎င်းသီချင်းကို ထပ်မံ၍ သီဆိုကြပါစို့!
ဟုတ်ပေသည်၊ ခရစ်တော်ဘုရားသခင် ဦးစွာပထမ “တံငါသည် ဖြစ်စေခြင်းငှါ” တပည့်တော်တို့အား ခေါ်တော်မူခဲ့သည်။ ကောက်လှိုင်း ရိတ်သိမ်းသူအဖြစ်၊ တစ်ပါးသူတို့ ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကို ဖမ်းဆီးရန်၊ ချက်ချင်း လက်ငင်းခေါ်တော်မူခဲ့၏! အာမင်၊ အာမင်!
၂။ဒုတိယ၊ ယေရှုသည် လူသစ်တို့အား ဝိညာဉ်ဖမ်းဆီးရန်ချက်ချင်း စေလွှတ်ခဲ့ပါ သည်။
ထိုသို့ ခေါ်ယူစေလွှတ်ခြင်းကို သတင်းကောင်းကျမ်းဖြစ်သော ရှင်ယောဟန်၌ တွေ့ရပါသည်။ နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်၏ တပည့်နှစ်ဦးတို့သည် ယေရှုနေရာအရပ်သို့ လိုက်သွားခဲ့သည်။ ထိုနှစ်ဦးထဲက တစ်ဦးထဲက တစ်ဦးမူကား ပေတရု၏ ညီအန္ဒြေဖြစ်ပါ သည်။ အန္ဒြေသည် ရောက်လာလျှင်၊ အစ်ကိုပေတရုအား “ငါတို့သည် မေရှိကို တွေ့ကြပြီ ဟုပြောဆိုလျှက် သူ့ကို ယေရှုထံသို့ ပို့ဆောင်လေ၏” (ယောဟန်၁း၄၁-၄၂)။ နောက်တစ်နေ့တွင် ဖိလိပ္ပုအား ယေရှုက “ငါ့နောက်သို့လိုက်လော့” ဟု မိန့်တော်မူ၏ (ယော၁း၄၁-၄၂)။ နောက်တစ်နေ့တွင် ဖိလိပ္ပုအား ယေရှုက “ငါ့နောက်သို့လိုက်လော့” ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။(ယောဟန်၁း၄၃) ဖိလိပ္ပုသည် ချက်ချင်း နာသနေလကို တွေ့ပြီး မေရှိယကို ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သည်ဟူ၍ ပြောခဲ့၏။ သာသနေလသည် ထိုသို့မဖြစ်ကောင်းဟူ၍ သံသယ ဝင်လေ၏ ဖိလိပ္ပုကလည်း “လာ၍ကြည့်ပါဟု ဆိုလေ၏” (ယောဟန်၁း၄၆)။ ဖိလိပ္ပုသည် သာသနေလအား ယေရှုထံသို့ပို့ ဆောင်သောအခါ သာသနေလသည် သည်လည်း ယေရှုနောက် ချက်ချင်းလိုက်လေ၏။
အန္ဒြေသည်လည်း ပေတရုအား ယေရှုသခင်ထံ ချက်ချင်း ပို့ဆောင်ခဲ့၏။ ဖိလိပ္ပု လည်း သာသနေလအား ယေရှုထံချက်ချင်းပို့ဆောင်ခဲ့လေ၏။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပင်၊ ထိုနောက်လိုက်တို့သည် တပါးသူတို့၏ ဝိညာဉ်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြသည်! ထိုသူတို့သည် တပါးသူတို့၏ ဝိညာဉ်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ အလိုငှါ၊ သင်တန်းကျောင်း တက်ရောက်ဖို မစောင်း ဆိုင်းခဲ့ကြပါ။ နှောင်းနှေးခြင်းမရှိဘဲ ထိုသူတို့သည် တပါးသူတို့၏ ဝိညာဉ်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ ကြပါသည်။! ထိုသူတို့က “လာ၍ ကြည့်ကြလော့ ဟူ၍ ဆိုခဲ့ကြသည်”။
အခြားသော ပုံဥပမာကို ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးလေး၌ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ခဲ့ကြရ မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာအာရ်ရိုက်စ် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ရှင်ယောဟန် အခန်းကြီး(၄)၌ ကျွန်ုပ်တို့ သိကြသည့်အတိုင်းပဲ၊ ရှာမရိ၊ အမျိုးသမီးက ယေရှုသည် မေရှိယ သခင်ဖြစ်ကြောင်းကို သိနားလည် ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် သူ၏ရေအိုးကို ချန်ထား ခဲ့ပြီး မြို့ထဲ့သို့ဝင်ကာ လူအပေါင်းတို့အား “အကျွန်ုပ် ပြုဖူးသမျှ သောအမှုအရာတို့ကို ဖေါ်ထုတ်သော သူကိုလာ၍ ကြည့်ကြပါ” “ထိုသူသည် ခရစ်တော်မှန် လိမ့်သလော့?” (ယောဟန်၄း၂၉)ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုသူ၏ သက်သေခံ စကားကြောင့် ထိုနေရာ ၌ပင် အချို့တို့သည် အသက်တာ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ အချို့တို့ သည် အသက်တာ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ အချို့တို့မူကား၊ ယေရှု အချို့တို့မူကား၊ ယေရှုသခင်ကို ကိုယ်တိုင်မြင်မှအသစ်တာ ပြောင်းလဲခဲ့ကြပါသည်။ ဒါကြောင့် အသင်းတော်၌ လူသစ်တို့သည် တပါးသူတို့၏ ဝိညာဉ်ကို ဖမ်းဆီးဖို့လိုပါသည်။ (John R. Rice, D.D., The Son of God: A Verse-by-Verse Commentary on the Gospel According to John, Sword of the Lord Publishers, 1976, p. 40).
ဒေါက်တာရိုက်၏ မှတ်ချက် ပေးထားသည့်အတိုင်း “ဝိညာဉ်များ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ လုပ်ငန်း သည် ချက်ချင်း လက်ငင်းသွားရောက် ဟောကြားရန်ပင်ဖြစ်သည်၊ တပါးသူတို့အား ယေရှုနှင့်မိတ်ဆက်ပေးရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိရမည်။ တပါးသူတို့အား ယေရှု သည် အပြစ်သားတို့၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်ဟု နားလည်လာသည့်တိုင် သင်သည်ရှင်း လင်းတတ်ရပါမည်။ ထိုသို့ အန္ဒြေသည် ပေတရုအား ယေရှုနှင့် မိတ်ဆက် ပေးခဲ့ပါသည်။” (ငဘငိ). ထိုကဲ့သို့ ရှာမရိ အမျိုးသမီးသည်လည်း မြောက်များစွာသော ရှာမရိလူတို့အား ယေရှုထံ ပို့ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည် ယေရှုကို ယုံကြည် ကိုးစားပြီး ချက်ချင်း ဝိညာဉ် ဖမ်းဆီးသူဖြစ်ခဲ့ပါသည်!
“ရှာမရိမိန်းမက၊ အကျွန်ုပ်ပြုဖူးသမျှသောအမှုအရာတို့ကို သူသည်ထုတ် ဖော်ပြီဟု သက်သေခံသောစကားကြောင့်၊ ထိုမြို့၌နေသော ရှာမရိလူ အများတို့သည် ယေရှုကိုယုံကြည်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် ရှာမရိလူတို့သည် အထံတော်သို့ရောက်လျှင်၊ မိမိတို့အရပ်၌ နှစ်ရက်နေတော်မူ၏။အခြား သောသူအများတို့သည် နုတ်ကပတ်စကားတော်ကြောင့် ယုံကြည်၍” (ယောဟန် ၄း၃၉-၄၁)။
ယေရှုသည် ဂါလိလဲအိုင်ကို ဖြတ်သန်းပြီး ဂါဒရပြည်သို့သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာ၌ ယေရှုသည် နတ်ဆိုးစွဲသော လူနာတဦးကို တွေ့ခဲ့ပါသည်။ ယေရှုသည် နတ်ဆိုးကို နှင်ထုတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ထိုလူသည် ယေရှု နောက်လိုက်လိုသော်လည်း၊ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“ယေရှုက၊ သင်သည်ကိုယ်အိမ်သို့ပြန်သွားလော့၊ ဘုရားသခင်သည် သင်၌ အဘယ်မျှလောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကို ကြားပြောလော့ ဟူ၍ လွှတ်လိုက်တော်မူလျှင်၊ ထိုသူသည် သွား၍ယေရှုကို တစ်မြို့လုံး တွင် အနှံ့အပြားသတင်းကြားပြောလေ၏” (ရှင်လုကာ ၈း၃၉)။
ယေရှုသည် အဘယ်မျှလောက် ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကို သိသဖြင့် ထိုခဏချင်းတွင် သူသည် ဝိညာဉ် ဖမ်းဆီးသူဖြစ်လေသည်!
ယေရှုသည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ သွားရောက်စဉ်တွင်၊ လမ်း၌ အနူသည် ဆယ်ယောက်ကို တွေ့ခဲ့သည်။ ထိုသူတို့က “သခင်ယေရှု ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်မသနား တော်မူပါဟု ဟစ်ကြော်ကြ၏” (လုကာ၁၇း၁၃)။ ယေရှုမြင်တော်မူလျှင်၊ သင်တို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ် ထံသို့သွား၍ ကိုယ်ကိုပြကြလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း “သူတို့သည် သွားကြစဉ်တွင် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏” (လုကာ၁၇း၁၄)။ ထိုသူတို့တွင် တစ်ယောက်သော သူသည် အနာရောဂါ ကင်းလွတ်သည်ကို သိမြင်လျှင်၊ ပြန်လာ၍ ကြီးသောအသံနှင့် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းလေ၏။ သို့သော် အများသော သူတို့သည် ဗိမာန်တော်သို့ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့အား ကိုယ်ကိုပြရန် သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် တို့သည် “ယုံကြည်ခြင်းတရားကို နားထောင်ကြ၏” (တမန်၆း၇)ဟူ၍ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ မိန့်ကြားထားပါသည်။ ဤယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် သံသယရှင်းလျှက်၊ ယေရှုအမိန့်တော်အတိုင်း ကျန်းမာခြင်း ကို ရရှိကြသော အနူနာတို့ကြောင့် အသက်တာပြောင်းလဲခဲ့ ကြမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့အား အနူရောဂါမှ ပျောက်ကင်း စေပြီးသောအခါ၊ ထိုသူတို့သည် တပါးသူတို့၏ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ဖမ်းဆီးသောသူများ ဖြစ်လာကြသည်။
ပင်တေဂုတ္တေပွဲနေ့၌ လူပေါင်း သုံးထောင်ကျော်တို့သည် ရှင်ပေတရု၏ တရား တော်ကို ကြားရကြသောကြောင့် အသက်တာ ပြောင်းလဲကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိကြ သည့်အတိုင်း အသစ်သော ယုံကြည်သူတို့သည် “ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်း၍ လူပေါင်းတို့ ရှေ့မှာ မျက်နှာ ပွင့်လန်းခြင်းအခွင့်ကို ရကြ၏။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သော သူတို့ကို လည်း နေစဉ်မပြတ် ဘုရားသခင်သည် သင်းဝင်စေတော်မူ၏”(တမန်၂း၄၇)။ ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ယေရုရှလင်မြို့ရှိ အသင်းတော်၌ နေ့စဉ်မပြတ် ထောင်ချီသော အသင်းသားတို့သည် အသစ်သော အသက်တာ၌ ပြောင်းလဲသူတို့ကို တွေ့မြင်ရကြသည်! ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ် ဖမ်းဆီးခြင်းသည် အရေးကြီးသောအရာ ဖြစ်သည်သာမက၊ အသင်းတော် တိုးတက်ရေးအတွက် ယေရုရှလင် အသင်းတော်နှင့် ဓမ္မသစ်ကာလ အသင်းတော်တို့၏ တခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်”။ (John R. Rice, D.D., Filled With the Spirit: A Verse-by-Verse Commentary on the Acts of the Apostles, Sword of the Lord Publishers, 1980 edition, page 104).
ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိ အသင်းတော်၏ ယုံကြည်သူတို့သည် အသစ်သောအသက် တာ၌ ပြောင်းလဲသည်နှင့် တပြိုင်တည်း၊ သူတို့၏ အပေါင်းအသင်းတို့အား အသင်း တော်သို့ ခေါ်ဆောင်ကြသဖြင့် “ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သော သူတို့ကိုလည်း နေ့စဉ် မပြတ် သခင်ဘုရားသည် သင်းဝင်စေတော်မူ၏” (တမန်၂း၄၇)ဟူ၍ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ မိန့်တော်မူ ထားပါသည်။
အေဒီ.၅၃ခုနှစ်တွင်၊ ရှင်ပေါလုသည် သက်သလောနိတ်မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သိကြသကဲ့သို့ ဂျူးလူမျိုးတို့သည် ယေရှုကို မိမိ၏ ကယ်တင်ပိုင်ရှင် အဖြစ် လက္ခံ ယုံကြည်ပါသည်၊ ဂရိလူမျိုး အများတို့သည်လည်း ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ ကြပါသည်။(တမန်၁၇း၄) ရှင်ပေါလုက ထိုယုံကြည်သူတို့အား စုပေါင်းပြီး အသင်းတော် ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ နောက်နှစ် အေဒီ၅၄တွင်၊ ကောရိန္ထုအသင်းတော်၌ ရှင်ပေါလု ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ ရှင်ပေါလုသည် သက်သာလောနိတ်မြို့၌ရှိ အသင်းတော် အား၊ စာရေးသားခဲ့ပါသည်။ ထိုစာကို “သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒ ပထမစာစောင်” ဟူ၍ ခေါ်ပါသည်။ ထိုမြို့လုံးကျွတ်နီးပါး တစ်နှစ်အတွင်း ခရစ်ယာန် ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ရှင်ပေါလု ရေးသားခဲ့သည်မှာ၊
“အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ သင်တို့ထံက၊ သခင်ဘုရား၏နုတ်ကပတ် တော်အသံသည် မာကော ဒေါနိပြည်အာခါယပြည်၌ ကျော်စောသည် သာမက၊ ဘုရားသခင်ကို သင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၏ သတင်းသည် အရပ်ရပ်တို့၌ ပြန်နှံ့လေ၏။ သို့ဖြစ်၍ ငါတို့သည် တစ်စုံတခုကိုမျှ ပြောစရာ အကြောင်းမရှိ” (၁သက်၁း၈)။
မာကောဒေါနိပြည်နှင့် အာခါယပြည်ရှိ အသင်းတော်၌ လူသစ် ယုံကြည်သူတို့သည် ပြည်တွင်း အမှုဆောင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ခရစ်ယာန် ဖြစ်လာကြသော သက်တမ်းသည် တစ်ဆယ့်နှစ်လပင်မပြည့် သေးကြသော်လည် ထိုသူတို့သည် ရာချီသောဝိညာဉ်များကို ဖမ်းဆီးခေါ် ယူခဲ့ကြပါသည်!
ဤနည်းလမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ အတုယူထိုက်သော နည်းလမ်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့၏ အပေါင်းအသင်းများအား “လာ၍ကြည့်ကြလော့” ဟူ၍ ခေါ်လေ့ရှိကြပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ထိုသူတို့သည် လူတို့အား အသင်းတော်သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဤနည်းလမ်းကို ယနေ့တရုတ်နိုင်ငံ၌ အသုံးပြုနေကြပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် အသင်းတော်သည် တဟုန်ထိုးတိုးတက် ကြီးမားလာပါသည်။ ဤနည်းလမ်းကို မွတ်ဆလင် တိုင်းပြည်တို့၌ ကျင့်သုံးနေကြသဖြင့် ထောင်ချီသော သူတို့သည် ခရယာန်ဖြစ်လာ ခဲ့ကြပါသည်။ ဟိုဟိုဒီဒီ အမှုတော် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည်။ တစ်စုံတဦး အား “လာ၍ကြည့်ပါ” ဟု ပြောပါ။ အရိုးရှင်းဆုံး ဟောပြောပါလေ!
ဤသည် ဓမ္မသစ်ကာလ ခရစ်ယာန်တို့၏ လှုပ်ရှားမှု ပုံစံပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ နုတ်ကပတ်တော်ကို အကြိမ်ကြိမ် ဖတ်ကြည့်သော်၊ ယုံကြည်သူ လူသစ်တို့သည် ချက်ချင်း လက်ငင်း ဝိညာဉ် ဖမ်းဆီးခဲ့ကြသဖြင့် မိမိတို့ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟဟတို့ဖြင့် အသင်းတော်သည်လည်း တိုးတက်လျှက်ရှိ၏! အသင်းတော် တိုင်းသည် တဟုန်တိုးတက် လျှက်ရှိပါသည်! သင်သည် သင့်မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟတို့ကို အသင်းတော်၌ ခေါ်ဆောင်လာပြီး ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်း ကြားနားပြီးလျှင်၊ Nနေစာ အတူ သုံးဆောင်နိုင်ပါစေ! အသင်းတော်တဟုန် တိုးတက်လာအောင် မိတ်ဆွေလာ ရောက်ကူညီလှည့်ပါ! “လူကို မျှားသောတံငါ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို မတ်တပ်ရပ်လျှက် သီဆိုကြစို!
သင်နှင့်အတူ တစုံတယောက်ကို ဤအသင်းတော်သို့ ခေါ်ဆောင်လာပါ! ထိုသူတို့အဖို့ နေ့လည်စာနှင့် ညနေစာကို ကျွန်ုပ်တို့အဆင်သင့် ပြင်ထားပါသည်! ထိုသူတို့အဖို့ မွေးနေ့ ဆုဆောင်း ဆင်နွဲပေးပါမည်! လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်၌ အခြားသောနေရာ၌ သင်ပျော်ရွှင်သည်ထက် ဤနေရာ၌သာ၍ ပျော်ရွှင်စေရမည်! လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၌ ပျော်စရာ အကောင်းဆုံး အသင်းတော်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ကြိမ် မိတ်ဆွေ၊ အခြားသူ တစုံတစ်ယောက်အား ဤအသင်းတော်သို့ ခေါ်လာပါ! စိတ်ရှုပ်ထွေး စေသောအရာဟူ၍ ဤအသင်းတော်၌ မရှိစေရပါ။ “ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ အသင်းတော်သို့ သွားကြစို့ဟူ၍ တပါးသူတို့အား ဖိတ်ခေါ်ပါ။ ပျော်စရာနှင့် အံ့ဩစရာကောင်းသော နေရာဖြစ်စေ ရပါမည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့ ဤအသင်းတော်သို့ ရောက်လာပါ မည်လား? ပြောလိုသည်မှာ မည်မျှပါ! သင့်အဖို့ လွယ်ကူပေမည်! ဆက်ပြီးကြိုးစား လုပ်ဆောင်ကြစို့! သင်နှင့်အတူ အခြားတဦး တယောက်အား ဤအသင်းတော်သို့ ခေါ်လာပါ! အားလုံးထိုင် နိုင်ပါပြီ။
ပထမဦးစွာ တပည့်တော်တို့အား၊ ယေရှု သင်ပေးသောအရာကို၊ ပထမဦးစားပေး သင်တို့အား သင်ကြားပေးပါမည်။ ယေရှု၊ သင့်အား ဒီကနေ့ပြောကြားသည်မှာ၊
“ထိုသူတို့အား ငါ့နောက်သို့လိုက်ကြလော့၊ သင်တို့သည် လူကိုမျှားသော တံငါဖြစ်စေခြင်းငှါ ငါပြုမည်ဟု အမိန့်တော်ရှိလေသော်” (မဿဲ၄း၁၉)။
သင်တို့တွင် အချို့သော သူတို့သည် ဤအသင်းတော်၌ ပထမအကြိမ် တက်ရောက် ခြင်းဖြစ်ပါမည်။ သင့်အား ယေရှု မိန့်တော်မူသည်မှာ “ငါနောက်သို့ လိုက်လော့၊ လူကိုမျှားသော တံငါဖြစ်စေမည်”ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ အကယ်၍ လူသစ်တစုံ တဦးအား ဤအသင်းတော်သို့ ခေါ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါက၊ ယေရှုသင့်အား “လူကိုမျှား သောတံငါ” ဖြစ်စေမည်။ နောက်အပတ် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် တစုံတစ်ဦးကို ခေါ်လာပြီး အသင်းတော်သို့ ကြွလာကြပါ! ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပါ! ၎င်းသီချင်းကို ထပ်မံရန် သီဆိုပါသည်။
လွန်ခဲ့သော အပတ်က အမျိုးသမီးတဦး ဤအသင်းတော်သို့ ရောက်ရှိလာ ပါသည်။ သူသည် “လူကို မျှားသောတံငါ” ဖြစ်နေပြီးဖြစ်ပါသည်။ သူသည် အသင်းတော် သို့ အခြားအမျိုးသမီး သုံးဦးကို အသင်းတော်သို့ ပို့ဆောင်ပြီးဖြစ်ပါသည်! ထိုကဲ့သို့ မိတ်ဆွေလည်း လုပ်ဆောင်ပါ! ဤအသင်းတော်သို့ အခြားသော တစုံတစ်ယောက်နှင့် အတူကြွလာပါ။ ရှေ့ဟောင်းက ဇာတ်မြူးကို ပျော်ပျော်ပါးပါးကြည့် ကြပါစို့! ကျွန်ုပ်တို့ မွေးနေ့ပွဲအတူ ဆင်နွဲကြပါစို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၌၊ မျောက်စည်ပိုင်း ဟာသ ဇာတ်ကွက်ထက် ရပ်ရွှင်ဘွယ်ကောင်းသော အရာရှိသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်အမေ မကြာခဏ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “မျောက်စည်ပိုင် ဟာသကစား ကွက်ထက် ပျော်ရွှင်စရာ၊ ကျွန်ုပ်၌ ရှိသည်” ဟူ၍ ပြောပြလေ့ရှိပါသည်! အသင်းတော်၌ တစုံတဦး၏ မွေးနေ့ဆုတောင်း ကျင်းပကြဖို့ တစုံတဦးအား၊ ပါတီပွဲသို့ ခေါ်ဆောင်လာပါ! ၎င်းဓမ္မသီချင်းကို ထပ်မံ၍ သီဆိုပါသည်!
အဘယ်မည်မျှသော သူတို့က “ကျွန်ုပ်တို့ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပါမည်” ကျွန်ုfပ်တို့နှင့်အတူ အခြားသောသူတို့အား အသင်းတော်သို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြင့် ခေါ်လာပါမည်ဟူ၍ ကတိပြုမည်နည်း၊ ထိုသို့သောသူရှိပါလျှင်၊ ကျေးဇူးပြု၍ လက်ထောင်ပေးပါ။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဒေါက်တာကေကန်မှ ဆုတောင်းပေးပါမည် (ဆုတောင်းသည်)။
အကယ်၍ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်း မရရှိသေးဘဲ ဤဘုရားကျောင်းကို ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်လျှင်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဂရုတစိုက် နားထောင်ပေးပါ။ ယေရှုခရစ်တော် သည် ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆင်းသက်တော်မူ၍ သင်၏အပြစ်ကြောင့် သင်အသေခံရမည့် ကားတိုင်ပေါ် ကိုယ်စား အသေခံပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ အလောင်းတော်ကို ကျောက်ဂူထဲဂူ သွင်းပြီး၊ ၎င်းပိတ်ထားသော ကျောက်ပေါ်တံဆိတ် ခတ်လျှက်၊ ရောမစစ်သားတို့ဖြင့် အစောင်ထားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ခန္တာကိုယ် အသွေးအသားအားဖြင့် ရှင်ပြန်ထမြောက် တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သေခြင်းမှအသက် ရှင်လျှက် ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်! ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီး၊ မြေကြီးပေါ်တွင် ရက်ပေါင်း၊ လေးဆယ်လုံးလုံး သူ့အပေါင်းအသင်းများနှင့်အတူ ရှိနေခဲ့ပါသည်။ သခင် သည် ဝိညာဉ်ခန္တာသာမဟုတ်၊ အသွေးအသားရှိကြောင်း လက်ပွတ် စမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။ ယေရှုသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ တက်ကြွတော်မူပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ လင်္ကျာတော်ဘက်၌ ထိုင်နေတော်မူသည်။
မိတ်ဆွေသည် မိမိတို့၏ ဇာတိအပြစ် ရှိသည့်အတိုင်း ခရစ်တော်ဘုရားကို သင်ယုံကြည် ကိုးစားပါလျှင်၊ သခင့်အသွေးတော်ဖြင့် သင်၏အပြစ်စွန်းကို ဆေးကြော သန့်စင်ပြီး ထာ၀ရအသက်ကို သင်အား ပေးတော်မူလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိတ်ဆွေ အား၊ ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး၊ မကြာမီ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်၊ ဆုတောင်းပေး ပါသည်။ ဘယ်ကိုသွားပြီး ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ နောက်ပတ်တနေင်္ဂနွေနေ့ ဤဘုရားကျောင်း သို့လာရောက်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ! သင်နှင့်အတူ အခြားတဦးတယောက်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ! သင်နှင့်အတူအခြားတဦး တယောက်အားလည်း ဘုရားကျောင်းသို့ ခေါ်ဆောင်လာပါ! သွားပြီး ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပါ!
အို၊ ဘုရားသခင်၊ ထိုသို့၊ သူတို့သည် ဆောင်နိုင်ရန်မစတော်မူပါ! အာမင်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတ်တန်အယ်လ်ချန်မှ -ရှင်မဿဲ၄း၁၈-၂၀ အထိ
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျဘင်ခင်ကိတ် ဂရိဖက်စ်မှ ၁၈၉၅-၁၉၈၀၊ ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် သီကုံးရေးသားသော “အချိန်အနည်းငယ်သာရှိ၏” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းနှင့် ၁၈၈၈-၁၉၅၇-ဟန်ရီ-ဒီ-ကလက်ခ် သီကုံးရေးသားသော “လူကိုမျှား သော တံငါဖြစ်စေမည်” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။
ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာ ဂျေအာရ် ဟောကြားသည်
၁။ ပထမ၊ ယေရှုသည် ဇာတိပကတိ တပည့်တော်တို့ကို ခေါ်ယူပြီး ဝိညာဉ်များ
၂။ ဒုတိယ၊ယေရှုသည် အခြားသော လူသစ်တို့အား ဝိညာဉ်ဖမ်းဆီးရန်၊ ချက်ချင်း စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။
ရှင်ယောဟန် ၁း၄၁ç၄၂ç၄၃ç၄၆၊ ၄း၂၉ç ၃၉-၄၁၊ရှင်လုကာ ၈း၃၉၊ ၁၇း၁၃ç၁၄
တမန်၆း၇၊ ၂း၄၇၊ ၁၇း၄၊ ၁သေ ၁း၈